Fanafihana nahafatesana mompera :: Noesorina avy hatrany ny lehiben’ ny zandary any Mahitsy • AoRaha
Fanafihana nahafatesana mompera Noesorina avy hatrany ny lehiben’ ny zandary any Mahitsy
Tezitra mafy ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny Zandarimariam- pirenena, raha nahalala ny tranga fanafihana nahafatesana mompera iray sy nandratrana olona iray tany Mahitsy, ny alin’ny sabotsy hariva lasa teo. Nilatsaka ny baiko avy amin’ny jeneraly Ravalomanana Richard, Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam- pirenena na SEG, omaly, amin’ny hanesorana avy hatrany eo amin’ny toerana an’ilay lehiben’ny tobim-paritry ny Zandarimaria any Mahitsy.
Nisy ny fitarainan’ireo mponina any Mahitsy, izay nilaza fa tsy mandray finday mihitsy ity lehiben’ ny zandary ity rehefa nitranga ny fanafihana na dia nantsoina tamin’ny karazana laharana maro aza izy, no anton’izao fanapahan-kevitra noraisina tamin’io zandary io izao. Tsy vitan’izay fa voalaza ihany koa fa minitra maro taty aorian’ny fotoana nitrangan’ny asa ratsy ny zandary vao tonga teo amin’ny toerana lasibatr’ ireo jiolahy, kanefa tsy lavitra ny tobin’ny zandary no misy an’io faritra nahafatesana relijiozy io.
“Betsaka ireo fitarainana voaray momba ny zandari- maria ao Mahitsy. Na tamin’ny antso an-tariby na tamin’ny haino aman-jery, na tamin’ny pejy fitarainana “Facebook doleances gendarmerie”. Noho izany, mila olona vonon-kiasa sy hiaro ny vahoaka sy ny fananany ny ato amin’ny Zandarimaria”, hoy ny SEG.
Olona roa no naratra voatifitry ny jiolahy am-polony nanafika mpivarotra mpamongady zava-pisotro iray tany Mahitsy, tamin’iny harivan’ny sabotsy teo, tokony tamin’ ny 7 ora sy sasany iny. Ankoatra ilay lehilahy mpivarotra dia voatifitra ihany koa ny mompera iray sendra nandalo teo amin’ilay toerana. Namoy ny ainy, omaly, iry mpivarotra rehefa notsaboina tany amin’ny hôpitaly Alakamisy.
Noho tsy fandraisana andraikitr’ireo zandary tany an-toerana dia nidina avy hatrany tany Mahitsy ny kolonely Randrianarivelo Anisse, lehiben’ny Vondron-tobim-paritry ny Zandarimaria Analamanga nitarika ny hetsika fikarohana ireo jiolahy. Hatramin’ny omaly hariva, dia valo ireo olona efa voasambotra.